10 Ukutya ihlabathi liyakwazi ukuLahla ngenxa yokutshintsha kwemozulu
Sciences soLuntu Imo iyatshintsha
Ngaba ukuguquka kwemozulu kusebenzisa ukutya kwakho okuthandayo?
Siyabulela kwiNkqubela, iiList i-Ingozi ayikho ixesha elide kwizilwanyana
Siyabulela utshintsho lwemozulu , asinakufuna nje ukulungelelanisa ukuhlala kwihlabathi elifudumalayo kodwa kungenanto encinci kakhulu.
Njengoko ukwanda kwe-carbon dioxide emoyeni, uxinzelelo lokushisa, ukusalela kwesantya, kunye nemimangaliso eninzi eneemvula ezinxulumene nokufudumala kwehlabathi ziyaqhubeka zichaphazela imozulu yethu yansuku zonke, sihlala sikhohlwa ukuba zichaphazela ubuninzi, ubunjani kunye neendawo ezikhulayo ukutya kwethu. Ukutya okulandelayo sele kuvelelwe ngempembelelo, kwaye ngenxa yoko, ifumene indawo ephezulu kwindawo yokutya "yengozi" yehlabathi. Uninzi lwazo lunokunqongophala kwiminyaka engama-30 ezayo.
UAlicia Llop / Getty Izithombe
Ingaba okanye ungazami ukukhawulela enye ikomityi yekhofi ngosuku, imiphumo yenguqu yemozulu kwiindawo zokukhula kwekhofi ingakushiya ukhetho oluncinane.
Zonke izityalo zekhofi eMzantsi Melika, e-Afrika, e-Asia naseHawaii zisongelwa ngokunyusa izinga lokushisa kwemoya kunye neepatheni ezinqabileyo zemvula, ezikhuthaza izifo kunye neentsholongwane ezingenakuncipha ukuba zitshintshe isityalo sekhofi kunye neembotyi zokuvuthwa. Isiphumo? Ukusika okubalulekileyo kwikhofi isivuno (kunye nekhofi encinane kwindebe yakho).
Imibutho efana ne-Australia ye-Climate Institute iqikelele ukuba, ukuba iipateni zemozulu zamanje ziyaqhubeka, isiqingatha semimandla ngoku ngokufanelekileyo esifanelekileyo semveliso yekhofi asiyi kuba ngowama-2050.
UMichelle Arnold / EyeEm / Getty Izithombe
Umzala wekhofi, umkhokho (i-chocolate), uxinzelelo olubangelwa ukufudumala kwamaqondo okufudumala kwehlabathi. Kodwa i-tshokoleta, akusiyo yimozulu efudumeleyo yinkinga. Imithi yeCacao ikhetha iindawo ezifudumeleyo ... ngokude nje ukuba loo mfudumalo ibambene kunye nomswakama ophezulu kunye nemvula eninzi (oko kukuthi, isimo sezulu sezulu). Ngokwe-2014 ingxelo evela kwi-Intergouvernemental Panel yoTshintsho lwemozulu (IPCC), ingxaki kukuba, amaqondo okushisa aphezulu axelwe ukuba amazwe ahamba phambili aphethwe yi-chocolate (i-Cote d'Ivoire, i-Ghana, i-Indonesia) alindeleke ukuba ihambisane ukwanda kwemvula. Ngoko, njengamaqondo atshisayo aphezulu atshisa ukunyuka okuvela kumhlaba kunye nezityalo ngokukhuphuka, akunakwenzeka ukuba imvula iya kwandisa ngokwaneleyo ukucima ukulahleka kwamanzi.
Kule ngxelo enye, i-IPCC ixela ukuba le miphumo inganciphisa ukuveliswa kwe-cocoa, oku kuthetha i-1 million yezigidi zeetrafti, i-truffles kunye ne-powder ngonyaka ngonyaka we-2020.
Linghe Zhao / Getty Izithombe
Xa kuziwa itiye (isiselo se-2 esithandayo kwilizwe eduze kwamanzi), iindawo ezifudumalayo kunye neempuphu ezivakalayo azigcini nje ngokunciphisa iindawo zehlabathi ezikhulayo ze-tea, nazo ziphazamisa ngokugqithisileyo.
Ngokomzekelo, e-Indiya, abaphandi sele befumene ukuba i- Indian Monsoon iye yazisa imvula eninzi, eyenza amanzi aqule izityalo kwaye adle i-flavour tea.
Uphando olutshanje oluvela kwiYunivesithi yaseSouthampton lubonisa ukuba iindawo zokuvelisa itiye kwezinye iindawo, ngokubhekiselele kwi-East Africa, zingancipha ngama-55 ekhulwini ngo-2050 njengemvula kunye nokushisa kwamaqondo.
Abaqoki beeyile (ewe, amaqabunga etiwa avunyiwe ngesandla) nazo zivakalelwa impembelelo yemozulu. Ngethuba lexesha lokuvuna, ukunyuka kwamaqondo omoya kwandisa ubungozi obushushu bokusebenza kwabasemasimini.
Imifanekiso Yomfanekiso / Natasha Breen / Getty Izithombe
Ingaphezulu kwesinye kwisithathu sezinyosi zaseMelika ziye zalahleka kwiColony Collapse Disorder , kodwa utshintsho lwemozulu lunempembelelo yalo ekuziphatheni kwezinyosi. Ngokwe-2016 isifundo seSebe lezoLimo lase-US, ukuphakama kwamazinga e-carbon dioxide kunciphisa amanqanaba eeprotheni kwi-pollen - umthombo wokutya wezona. Ngenxa yoko, iinyosi azifumani ngokwaneleyo ukutya okunomsoco, okwangoku kunokukhokelela ekuveliseni ngaphantsi kwaye kuphele ukufa. Njengoko i-USDA yezityalo zemvelo yezityalo u-Lewis Ziska ithi, "I-pollen iya kuba yinyama yokutya yezinyosi."
Kodwa asiyindlela yodwa yemozulu ephazamisa iinyosi. Ukushisa okufudumalayo kunye nekhephu elidlulileyo kungabangela ukusabalalisa kwembali kunye nemithi; Ngaphambi koko, ukuba inyosi isenokuba isesigxini se-larva kwaye ingasakhuli ngokwaneleyo ukuba ipholile.
Izinyosi zabasebenzi abancinci ukuphola impova, ubuncinci obunokwazi ukwenza. Kwaye oko kuthetha izityalo ezimbalwa kakhulu, ekubeni izithelo kunye nemifuno yethu siyabonga ngenxa yendiza engenamandla kunye ne-pollination yizinyosi zethu zasekhaya.
Umthombo wesithombe / i-Getty Izithombe
Utshintsho lwemozulu luchaphazela ulwandle lwehlabathi ngokunjalo nezolimo.
Njengoko ukufudumala kwamaqondo omhlaba kuphakama, ulwandle kunye nemigudu yamanzi kuthatha ukutshisa kunye nokufudumala kwabo. Isiphumo kukuba ukuncipha kweentlanzi, kubandakanywa nama-lobster (abo badalwa ngamakhaza abandayo), kunye ne-salmon (amaqanda ayo afumana nzima ukuhlala kwindawo ephezulu yamanzi). Amanzi afudumeleyo akhuthaza iibhaktheriya zaselwandle ezinobuthi, njengeVibrio, ukuba zikhule kwaye zibangele ukugula kubantu xa zithandwa yizinkumbi zasemanzini ezihlaza, njengama-oyster okanye i-sashimi.
Kwaye ukwaneliseka "ukuhlaselwa" xa udla i-crab ne-lobster? Inokuthi ikhutshwe njengamaqabunga e-shellfish ekwakheni iigolum ze-calcium carbonate, ngenxa ye- acidification yolwandle (i-carbon dioxide).
Okubi nakakhulu kukuba kunokungasadli ukutya kwezilwanyana zasemanzini, okokutsho ngo-2006 i-University of Dalhousie ukufundisisa iYunivesithi. Kulolu cwaningo, izazinzulu ziqikelele ukuba ukuba ngaphezulu kokuloba kunye nokunyuka kwamazinga okushisa kuqhubekile kwinqanaba labo langoku, iifowuni zezilwanyana zasemanzini ziya kuphelelwa ngonyaka ka-2050.
I-Nipaporn Arthit / EyeEm / Getty Izithombe
Xa kuziwa kurayisi, ukutshintsha kwemozulu yethu kuyingozi kakhulu kwindlela ekhulayo kunezo zilimo.
Ukulima kwelayisi kwenziwa kwiindawo ezikhukhulayo (ezibizwa ngokuba ngama-paddies), kodwa njengoko izinga lokushisa lokunyuka kwehlabathi likhupha ngakumbi ukusalela kwesomiso, iindawo zomhlaba zeerayisi ezinokukhula zingenakho amanzi aneleyo okukhukula amanqanaba kwindawo efanelekileyo (ngokuqhelekileyo ama-intshi ama-intshi). Oku kunokwenza ukuba ukulima kwesi sityalo esinezondlo kunzima kakhulu.
Ngokugqithisileyo, irayisi inomthelela ekufudumeni okunokuthi kutshabalalise ukulima kwayo. Amanzi kumadayisi elayisi avimbela i-oksijeni esuka kumhlaba othabathayo kwaye enza izimo ezifanelekileyo ze-bethriya eziphuma emethane. I-methane, njengokuba uyazi, iyona gesi ephezulu yokufudumala engaphezu kwama-30 njengamandla afana nokutshisa i-carbon dioxide.
UMichael Hille / EyeEm / Getty Izithombe
Uphando olutshanje olubandakanya abaphandi be-Kansas State University bafumana ukuba kwiminyaka emashumi ezayo, ubuncinci kwikota yengqolowa yehlabathi iya kulahleka kwiimeko ezibi kakhulu zezulu kunye nokunyanzeliswa kwamanzi ukuba akukho zithintelo ezithathayo.
Abaphandi bafumanise ukuba iziphumo ezivela kutshintsho lwemozulu kunye nokushisa kwawo okwandayo kwengqolowa kuya kuba nzima ngakumbi kunokuba kulandelwe kunye kwaye kwenzeke kungekudala kunokuba kulindeleke. Nangona ukwanda kweqondo lokushisa kuyimingeni, umngeni omkhulu kunamaqondo atshisayo aphethwe yintshintsho yemozulu. Abaphandi bafumanisa ukuba ukunyuka kwamaqondo okushisa kunciphisa ixesha lokuba iingqolowa zikhule kwaye zivelise iintloko ezipheleleyo zokuvuna, okubangelwa kukutya okuncinane okuveliswa kwisityalo ngasinye.
Ngokomzekelo wophando olwakhululwe yiPostdam Institute for Research Climate Impact Research, ingqolowa kunye nezityalo zesoya zinokulahlekelwa ngu-5% wokuvuna kwazo zonke iintsuku zokushisa zikhuphuke ngaphezu kwe-86 ° F (30 ° C). (Izityalo zeMbewu ziyakhathalela ngokugqithiseleyo amaza okushisa kunye nesomiso). Kule nqanaba, ukuvunwa kwekolweni, i-soybean, kunye nombona wegesi kungasweleka kuma-50 ekhulwini.
Petko Danov / Getty Izithombe
Iipeaches kunye nee-cherry, izityalo ezimbini zelitye ezizithandayo zonyaka wehlobo, okunokwenzeka ukuba zihlupheke ezandleni zelanga.
Ngokutsho kukaDavid Lobell, isekela lomlawuli weZiko loKhuseleko lokutya kunye neNgqongileyo kwiYunivesithi yaseStanford, imithi yezithelo (kuquka i-cherry, ipum, pear, kunye ne-apricot) idinga "iiyure zokuphazamisa" - ixesha elide xa zichazwe kumaqondo obushushu ngaphantsi kwe-45 ° F (7 ° C) ubusika. Yeka iphothi efunekayo, kunye neziqhamo kunye nemithi yomlambo ulwabalazela ukuphula i-dormancy kunye neentyatyambo entwasahlobo. Ekugqibeleni, oku kuthetha ukuhla kwexabiso kunye nomgangatho wezityalo eziveliswayo.
Ngonyaka wama-2030, izazinzulu ziqikelela ukuba inani lama-45 ° F okanye iintsuku ezibandayo ngexesha lobusika liye linciphisa kakhulu.
Umfanekiso (s) nguSara Lynn Paige / Getty Izithombe
Ukunyuka kwamaqondo okushisa kwi-Northeast yase-Amerika kunye neCanada kuchaphazele kakubi imithi ye-sugar maple, kubandakanya ukutyhawula imithi 'ukuwa kwamagqabi kunye nokugxininisa umthi ukuya kwehla. Kodwa ngelixa i-retreat yenani le-sugar maple e-US linokuthi linamashumi eminyaka kude, iimeko zemozulu sele ziphazamisa iimveliso ezixabisekileyo kakhulu - i-maple syrup - namhlanje .
Ngomnye, ubusika obushushu kunye nama-yo-yo amaxesha (amaxesha atshisayo aboniswa ngamaxesha okufudumala okungenakusobala) eNyakatho-ntshonalanga anciphise "ixesha lokushukela" -ixesha apho amaqondo amancinci anele ngokwaneleyo ukuze kubekho imithi yokuguqula i-star-up starches kwi-sugar i-sap, kodwa ayifudumala ngokwaneleyo ukuze ibangele. (Xa imithi ihluma, i-sap ithetha ukuba ayibi kangako).
Ukushisa okushisa kuye kwanciphisa ubumnandi be-maple sap. Into esiyifumene kukuba emva kweminyaka xa imithi ibhiqiza imbewu eninzi, kwakukho ishukela elincinane kwi-sap, "kusho i-Tufts University of ecologist Elizabeth Crone. I-Crone ichaza ukuba xa imithi igxininisekile, ibeka imbewu eninzi. "Baya kufaka imali engakumbi kwimithombo yabo ekuveliseni imbewu enokuqiniseka ukuba baya kwenye indawo apho iimeko zokusingqongileyo zibhetele." Oku kuthetha ukuba kuthatha iigalons ezingaphezulu zamanzi ezitshatsheli zokwenza i-gallon ecocekileyo ye-maple isiraphu kunye ne-70% efunekayo yeshukela. Ukuphindwe kabini kangangezigidi ezininzi.
Iifama zaseMaple nazo zibona i-syrups ezinemibala engaphantsi, enokuthi ithathwa njengomqondiso "wemveliso" engaphezulu. Ngexesha lemfudumalo, iminyaka emnyama okanye i-syrups yamber iveliswa.
ULauriPatterson / Getty Izithombe
Iifotyi (kunye nebhotela ye-peanut) ingaba yinto elula kakhulu yokutya, kodwa isityalo se-peanut siyithathwa njengento enobungakanani, nokuba phakathi kwamafama.
Izityalo zePeanut zikhula kakuhle xa zithatha iinyanga ezintlanu zezulu ezifudumeleyo kunye nemitha eyi-20-40 yemvula. Nantoni na ngaphantsi kwaye izityalo aziyi kuphila, zingaphantsi zivelise iipods. Akulona iindaba ezilungileyo xa ucinga ukuba imimandla yemozulu iyayivumelana nemozulu yexesha elizayo iya kuba yinto eqaqambileyo, kubandakanywa isomiso kunye nezifudumezi .
Ngowe-2011, ihlabathi lafumana ingcamango yexesha elizayo le-peanut xa imeko yeenkomfa kwi-peanut-ekhula ngezantsi-mpuma ye-US ibangela izityalo ezininzi ukuba zime kwaye zife ngenxa yokuxinzelelwa kobushushu. Ngokwe-CNN Money, i-spell eyomileyo yenze ukuba amaxabiso e-peanut aphakame ngama-40 ekhulwini!
Yintoni Ukufudumala Kwehlabathi?
Iimiphumo zeMpilo zoKuHlahla kweMhlaba
Ukufudumala kweMhlaba ukuMisa ukuNqongophala kokutya
Ukufudumala kweMhlaba: i-9 yezona zixeko ezinobungozi
Yinjani iProtoy Kyoto?
Ngaba iiVolkano zivelisa iGesi engaphezulu kweGesi yokuShisa ngaphezu kwabantu?
Kutheni iindawo zokuLwandle eziLwandle zikhuselekileyo?
I-Arithmetic and Geometric
Ziziphi iifrimesi zeKrisimesi eziqhelekileyo zamandulo?
Ziqhelanise ekudibaniseni izivakalisi ezinemibala
Indlela yokufaka i-Bilge Pump Alarm kwi-Boat yakho
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseAlam Halfa
Iimviwo ze-Oktobha kunye neMakhasi aMbala
Iveki yokuQala ngokuPheleleyo Ukunyamekela iPhakheji ye-Young Adults
Ukuguqulwa kweMerika: I-Boston Massacre
Mahalakshmi okanye uVaralakshmi Vrata Puja